Iifowuni ezintsha zibonisa ukwehla kobomi bebhetri | I-Androidsis
UAron Rivas | | Ibhetri, Iiselfowuni, Izaziso
Kwingxelo yakutshanje evela kwiWashington Post, kubonakala ngathi uninzi lweeflegi ezintsha zinciphise ubomi bebhetri xa kuthelekiswa noogxa babo abadala. Kuyo ineenkcukacha ukuba Uninzi lwabavelisi abakhulu banciphisile ubomi bebhetri ye-smartphone, endaweni yokulungiselela ukugcina izixhobo ziqhuba ixesha elide.
Kuvavanyo olucacisiweyo lobomi bebhetri, intatheli yaseWashington Post uGeoffrey A. Fowler ufumanise ukuba uninzi lwee-smartphones kwi-iOS nakwi-ecosystem ye-Android ziye zancipha kakhulu kubomi bebhetri xa kuthelekiswa nezangaphambili. Ke, Sinika iinkcukacha zento exeliweyo.
UGeoffrey A. wenze iimvavanyo nge Google Pixel 3, i-iPhone XS, I-Samsung Galaxy Note 9 kunye nezinye izixhobo. Wafumanisa ukuba I-Google Pixel 2 kunye nePixel 2 XL Zibaleka ixesha elide kunePixel 3, nangona ingekho ngaphezulu kwePixel 3 XL. Ngendlela enye, I-iPhone XS iphume kakuhle xa kuthelekiswa ngokubhekisele kwi-iPhone X, i-iPhone 8 kunye ne-8 PlusNangona i-iPhone XS yayingalingani nakwezinye zeemodeli.
Imivalo eluhlaza okwesibhakabhaka: Iifowuni zika-2018 / iiGrey bars: 2017 iifowuni
Izixhobo zokuphela eziphezulu ezinje nge-iPhone XR kunye ne-Galaxy Note 9 zenze ngcono kwiimvavanyo kwaye zakwazi ukuqhuba ngaphezulu kwegrafu ngaphezulu kwezinye iimodeli. Nje, Izixhobo ezinkulu ziye zatyhilwa ukuba zibubomi obungcono bebhetri. Kwitheyibhile engentla, uyabona ukuba ezinye izixhobo zisebenza ixesha elide kuneefowuni ezindala.
Njengesixhobo, uGeoffrey A. Fowler wasebenzisa imitha yokukhanya ukulinganisa inqanaba lokuqaqamba kunye neskripthi sokuhamba kwiiwebhusayithi unyuka ezantsi ngokuzenzekelayo. Ekugqibeleni, kulinganiswe ixesha elithathiweyo ukuphelisa ngokupheleleyo isixhobo ngasinye. Itheyibhile engentla iya kukunika zonke iinkcukacha ngesixhobo ngasinye.
Iifowuni ezinemiboniso ephucukileyo, enesisombululo esiphakamileyo okanye ukusetyenziswa kweetekhnoloji ezinje nge-OLED, zenza kakubi. Obu buchwephesha bunokufuna amandla ngakumbi ukukhupha ukukhanya, ke ukuba ufuna ukuba ifowuni ihlale ixesha elide, yehlisa ukukhanya kwesikrini okanye uyeke ukujonga ifowuni yakho amaxesha amaninzi ngemini, ekunzima kakhulu kubasebenzisi abaninzi, kuba ungatsho uninzi ezi.
Kodwa into iya ngaphaya kobungakanani bebhetri. Ayikho elula ngolu hlobo. Uyayikhumbula iNokia endala "engenakutshatyalaliswa"? Abo babeneebhetri ezincinci kakhulu kunee-smartphones zanamhlanje, kodwa banokuhamba iintsuku ngaphandle kokuhlawuliswa.
I-scoop esiyinikwa yile ngxelo inomdla kakhulu, kuba inomdla wokwazi oko abavelisi baya behla ubomi bebhetri ngokukhutshwa okutsha -eziza kuba zichasene ne-100% yamatyala-, nangona amanye amasebe ephucula. Nangona kunjalo, i-iFixit, indawo yokulungisa eyenza uhlalutyo lwenyembezi kwizinto zefowuni, ithi amandla ebhetri aphantse aphindeka kabini kule minyaka mihlanu idlulileyo.
Siyathemba ukuba, ukusukela ngoku, Ii-OEMs ziqala ukufunda iindlela zokunyusa ubomi bebhetri, endaweni yokugcwalisa kuphela nangakumbi amandla afanayo, into, kwezinye iimeko, engonelanga ukuba iifowuni zihlale ixesha elide. Ewe kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba itekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza iphucule kwiimodeli zayo ezininzi. Oku kufana kakhulu "nokubeka kunye nokuqhubeka."
Izinketho zethu kwikamva elikufutshane kunokwenzeka ukuba zibe: fumana ifowuni enexabiso eliphantsi okanye uyixhome rhoqo. Ukutshaja ngokukhawuleza nangokufanelekileyo sisicwangciso sabenzi abathile. Iifowuni ezininzi ngoku zikwaxhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo, nangona, ngexesha lokuthenga, zihlala ziboniswa njengezona zixabise kakhulu kwaye zingenakufikeleleka kubathengi abaninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ubomi bebhetri kwezinye iifowuni ezintsha buye bonakala xa kuthelekiswa nezangaphambili
IMotorola ibhalisa itshaja yokuqala engenazingcingo